यी हुन् छाती दुख्ने प्रमुख कारण - Health Today Nepal
यी हुन् छाती दुख्ने प्रमुख कारण
January 17th, 2019 बिशेषज्ञ लेख0comments
डा. ओममूर्ति अनिल,
छाती दुख्नुको अर्थ मुटुकै कारण हो भन्न मिल्दैन, हामी भ्रममा परेर छाती दुख्नुको कारण मुटुमै समस्या भएको ठान्छौंं तर त्यो सोचाइ गलत हो । लगभग ९० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसमा छाती दुख्ने कारण मुटुसँग सम्बन्धित हुँदैनन् । तर दुखाइको प्रकृति फरक भएकोले यदि तपाइलाई मुटुको समस्या छ भने चाँडै नै डाक्टरलाई देखाई हाल्नुपर्छ । र अझ हृदयाघातको कारणले छाती दुखेको भए, एक मिनेट पनि समय खेर नफाली अस्पताल गइहाल्नु पर्छ ।
छाती दुख्नुको कारणहरू
हाम्रो छातीमा मुटु र फोक्सो दुई प्रमुख अंंगहरू हुन्छन् । छाती दुखेमा पहिला यी दुई अंगहरूको कारणले हो वा होइन भनी सोच्नुपर्छ । छातीको बनावटमा हड्डी, मांसपेशी, नसा र छालाको पनि भूमिका भएकाले यी अंंगहरूको समस्या भएर पनि छाती दुख्न सक्छ । धेरैजसो अवस्थामा छाती दुख्ने कारण हड्डी र मांंसपेशीसँग नै सम्बन्धित हुन्छन् । ओपीडीमा छाती दुखेर जँचाउन आउने धेरैजसो बिरामीहरूमा यी कारणहरू नै प्रमुख भएका तथ्य हाम्रो अध्ययन र अनुभवले देखाएको छ । तर, पनि आकस्मिक कक्षमा आएका विरामीको पहिला मुटु र फोक्सोको जाँच गर्नु नै उचित हुन्छ । अर्थात् इमर्जेन्सीमा छाती दुखेर आउने बिरामीहरूमा हृदयाघातको कारणले छाती दुखेको हो वा होइन भनी निश्चित गर्नुपर्छ ।
छाती दुख्ने कारण कसरी थाहा पाउने ?
फोक्सोको कारणले छाती दुख्दा लामो श्वास लिँदा वा फेर्दा चस्स छातीको एकातिर (दायाँ÷बाँया) करङमा दुख्यो भने फोक्साको कारणले दुखेको हुनसक्छ । दुब्लो मानिसमा यो समस्या बढी देखिन्छ । यस्तो बेलामा स्वाँस्वाँ हुने ज्वरो आउने पनि हुन सक्छ । निमोनियाको कारणले पनि यस्तो हुन सक्छ । मांसपेशी वा हड्डीको कारणले छाती दुख्दा छातीको दायाँ भाग, पछाडी वा छेउतिर करंगमा दुख्यो भने मांंसपेशी वा हड्डीको कारणले हुन सक्छ । यो भाग दुखेमा मुटुको कारणले हुने सम्भावना कम हुन्छ । हातले छाम्दा दुख्ने, श्वास फेर्दा दुख्ने, छातीको घुमाइसँगै दुखाइको तीव्रतामा परिवर्तन आउने जस्ता लक्षण भएमा मांंसपेशी र हड्डीको कारणले दुखेको हुनसक्छ । मुटुको कारणले छाती दुख्दा छातीको बीच भाग वा बायाँतिर एकनासले दुख्ने वा दबाब महसुुस गर्ने वा पोल्ने हुन सक्छ । दुखाइको तीव्रता कम वा बढी हुन सक्छ । दुखाइ सँगसँगै धेरै पसिना आउने, वान्ता हुन खोज्ने, मुटु ढुकढुक हुने, डर लाग्ने, कमजोरी हुनेजस्ता लक्षणहरू भएमा हृदयाघातको सम्भावना बढी हुन्छ । हृदयाघातबाट छातीको दुखाइ देब्रे हात, घाँटी वा पिठ््यूमा पनि सर्न सक्छ ।
छाती दुखेमा के गर्ने ?
१. हृदयाघात जस्तो लक्षण छ भने तुरुन्तै अस्पतालको इमर्जेन्सीमा पुगेर ईसीजी. गर्ने।
२. हृदयाघात जस्तो लक्षण छैन तर पनि दुखाइ लगातार भइरहेको छ भने चाँडै चिकित्सकको परामर्श लिने।
३. दुखाइमुटु रोगसँग मिल्दैन र धेरै अप्ठ्यारो पनि भएको छैन भने योजना बनाएर सुविधाअनुसार मुटुरोग विशेषज्ञसँग जँचाउने।
४. जोखिम उच्च भएका बिरामीलाई जस्तो किसिमको छाती दुखाइ भएपनि मुटुरोग विशेषज्ञको परामर्श लिनु आवश्यक हुन्छ
Previous article नागरिक कम्युनिटी हस्पिटलमा अत्याधुनिक सिटी स्क्यान
Next article सुदूरपश्चिम प्रदेशमा फागुन ७ देखि विशेष स्वास्थ्य अभियान